Global Voices teny Malagasy » Global Voices Podcast: Taom-baovao 2012 Feno Fahavitrihana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Janoary 2012 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra Jamillah Knowles Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Amerika Latina, Eoropa Andrefana, Angletera, Bolivia, Brezila, Cote d'Ivoire, Danemarka, Etazonia, Fanatanjahantena, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina, Global Voices Podcast
Miarahaba an'izao Tontolo izao ary Tongasoa amin'ny taona 2012!
Anatin'ity andian'ny podcast ity dia hamerina hibanjina ny taona 2011 isika, handinika ireo fitoviana sy fahasamihafàna eo amin'ny fanaovan-gazety mahazatra sy ny fampiasàna ny media vaovao, hamantatra momba ny fihaonan'ny Rising Voices mitondra aingam-panahy natao tany Bolivia mba hanohanana ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogin'ireo teratany sy tsy mitovy ara-piaraha-monina.
Nanao dia tamin'ny kodiaran-droa eraky ny aterineto ihany koa izahay
Fibanjinana ny 2011
Ho an'ireo mpanao gazetim-bahoaka, mpitoraka blaogy sy ireo mpitsikera eny rehetra eny, taona tena nahatalanjona ny taona 2011. Sarotra ny maminavina fotoana talohan'ny ankehitriny izay niatrehan'ireo namanantsika sy mpamatsy antsika fandrahonana, fisamborana na herisetra anatin'ny mafy tahaka izao. Tsy ampy taona iray akory izay hatramin'ny nahitantsika dindo tahaka izany sy fiovana tao anatin'ny tontolon'ny mediam-bahoaka ao amin'ny aterineto. Ho an'ireo mpanoratra sy namantsika manokana maro eto amin'ny Global Voices, mbola sarotra ny vanim-potoana hatrehana, nefa ndeha hanana fanantenana hisian'ny fikirizana sy vanim-potoana tsara kokoa amin'ny ho avy.
Tsy raharaha mora ny manao jery todika taona iray an'ny Global Voices Online! Ny lefitry ny mpamoaka lahatsoratsika, Emma Brewin , miresaka momba ny fandinganana mankany amin'ny fitosaka maherinà vaovao eran-tany, izay ho azy dia miavaka ao anatin'ireo tantara nandritry ny taona iray tena feno.
Avy any amin'ny mahazatra mankany amin'ny media vaovao
Ireo ekipam-paritry ny Global Voices dia ahitana mpanoratra, mpitoraka bilaogy ary mpamokatra media maro karazana samy hafa. Ny sasany, toa an'i Thiana Bondo , mpanoratra sy mpandika teny ao amin'ny Global Voices avy any Bahia, Brezila dia avy ao amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety. Ny mpiandraikitra ny famoahan-dahatsoratsika, Solana Larsen  dia niresaka niaraka tamin'i Thiana, izay mipetraka any Londona amin'izao fotoana izao, momba ny fahasamihafana eo amin'ny maha-mpanao gazety isanandro azy any Brezila, sy ny fanoratana ho an'ny Global Voices.
Fanohanana ny vohikalan'ny vazimba teratany any Bolivia
Tamin'ny Desambra, nampiantrano hetsika naharitra telo andro tany Cochabamba, Bolivia ny Rising Voices  ho an'ireo mpitoraka bilaogy any Bolivia. Ny tanjona tamin'izany dia ny hanohanana ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogy matanjaka, sy maro sampana. Nisy ireo atrikasa sy famelabelarana ireo fitoavana teknika sy ny fikarakarana paikady. Tamin'ny teny Espaniola io fivoriana io, ary nantsoina hoe Conectándonos  (Mifandray).
Maria Mercado dia mpianatra sy mpirotsaka an-tsitra-po izay miasa miaraka amin'ireo fianakaviambenà zanatany. Nanatrika ilay fivoriana izy ary nilaza taminay ny zavatra nianarany. Raha te haheno bebe kokoa ianao, misy podcast iray mahafinaritra momba ilay hetsika iray manontolo  ao amin'ny Rising Voices avy amin'ny Tale mpiandraikitra antsika Georgia Poppellwell , sy ny Talen'ny Rising Voices Eduardo Avila .
Vohizo miaraka aminay ny bisikiletinao!
Mety hieritreritra ianao fa voasaraky ny elanelan-tany isika ary mifandray amin'ny aterineto fotsiny ihany, nefa toa manana fahazàrana vitsivitsy iraisana ihany koa isika. Vonona lalandava miaraka amin'ny fitaovana fitahirizany, niresadresaka ireo zava-mahagagan'ny fandehandehanana amin'ny bisikleta miaraka amin'ny Tale mpanatanteraky ny Global Voices, Ivan Sigal  i Solana Larsen . Araka ny hazavain'Ivan, ny fianakaviamben'ireo mpivoy dia isan'ny iray mihetsiketsika tokoa.
Raha ny mahazatra dia midika izany fa tsy maintsy nanontany ireo mpanampy ara-peon'ireo mpamoy bisikiletintsika aho mba hizaran'izy ireo ny heviny amintsika amin'ny kodiaran-droa.
Cyrus Farivar , mpanao gazety Amerikana mipetraka any Alemana, ary nanoratra ilay “The Internet of Elsewhere ” dia nitafa taminay momba ny fivoizana bisikilety – mivantana avy eny ambony sezan'ny bisikilety. Any Danemarka, Maria Grabowski Kjaer  dia nizara ny feon'ny tanàna izay nankalazana ny fivoizana bisikilety. Ho an'i Maria dia tsy fomba fitaterana fotsiny ihany ny fivoizana bisikilety fa fomba fiaina ihany koa.
Dia izay izany, izay no mamarana ny podcast voalohantsika amin'ity taom-baovao ity. Hanangona ireo feo sy hiresadresaka momba ny vaovaon'izao totolo izao sy ireo fahazàrana ao anaty aterineto mandritra ity taona 2012 ity isika, ka noho izany dia manaraha ny vaovao ary ampahafantaro anay mandrakariva ny zavatra tianao ho heno. Hatreto, noho ny aingam-panahy naterak'ireo kodiarantsika roa mahagaga, iny aho no lasa handeha hianatra ny fomba hivoizako ny bisikiletiko ka tsy hiteraka loza ho ahy sy ny hafa!
Maheno mozika Creative Commons mahatehotia maro ianao ao anatin'ity podcast ity. Isaorana i Mark Cotton  tamin'ireo famokarana mahatalanjona ireo ary ihany koa ho an'ireo feo mahagaga rehetra tamin'ireo hetsika sy horonantsary izay nanampy tamin'ny fanambàrana ity podcast ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/04/27034/
 podcast iray mahafinaritra momba ilay hetsika iray manontolo: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/12/18/bolivia-the-public-event-of-conectandonos-gathering/